Saturday November 28, 2020 - 13:05:19 in Wararka by Mogadishu Times
Waxaa Maanta Qabuuro ku yaalla Isbitaalka Xoogga ee Magaalada Muqdisho Aas wadareed loogu sameeyay 8 dhalinyaro ah oo xalay ku geeriyooday Qarax xoogan oo xalay ka dhacay Magaalada Muqdisho gaar ahaan meel u dhow Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Waxaa Maanta Qabuuro ku yaalla Isbitaalka Xoogga ee Magaalada Muqdisho Aas wadareed loogu sameeyay 8 dhalinyaro ah oo xalay ku geeriyooday Qarax xoogan oo xalay ka dhacay Magaalada Muqdisho gaar ahaan meel u dhow Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Qaraxa oo ahaa mid Is-miidaamin ah ayaa waxaa fuli yay qof da' ah oo watay khamiis iskuna soo xiray Jaakad waxyaabaha qarxa ah, isla markaana uu gudaha u galay Maqaayad Gelato Divino oo ah goob lagu iibiyo Mac-mac aan oo ay daka fadhiistaan. Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxaas oo jugtiisa inta badan maqlay degmo oyinka Gobolka Banaadir, waxaana waxyeelada inta ba dan ay soo gaartay dad u badan dhalinyaro oo ku Cawe ynayay Maqaaxida Gelato Divino.
8 dhalinyrao ah oo siwey loo yaqaanay ayaa ku naf-waayay qaraxas, halka dad ku dhow 8 qof kalena ay dhaawacyo kala duwan kasoo gaareen, kuwaasi oo la geeyay xarumo Caafimaad oo ku yaalla Caasimadda dalka, si xaaladooda Caafimaad loogu dabiibo.
Boqolaal qof oo isugu jiray Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qeyb galay Aaska loo sameeyay dhalinyaradii xalay ku geeriyooday qaraxaas, iyagoona tacis loo diray.